Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Hogaamiyaha Dhabta Ah Kama Weecdo Runta, By Sulaymaan.
Maqaal: Hogaamiyaha Dhabta Ah Kama Weecdo Runta, By Sulaymaan.
Posted by Dulmane	/ March 10, 2019
Hab-dhaqanka Maamul wanaaga waa mid ay Sal u tahay Cadaalada iyo samo ka talinta Ummadiisa, iyadoo markasta mudnaanta la siinayo Danaha Guud iyo xilgudashada ku haboon.
Silsilada waayaha Noloshu waa mid tusaale iyo cashirba uugu filan, islamarkaasina wada kasta hilinkeeda ku haboon Mariya iyadoon cidkale loogu aaboyeelayn.
Kala xulashada shakhsiyaadka matalaadooduna waa u dan qaab-socodka kala socodsiinta hawlkasta, taasi macnaheedu: waa Ruux kasta meesha uu ka soo bixi karo hab maamuus ahaan loogu ogaado, una dheeraato daacadnimo iyo xilgudashada ku haboon.
Aadmuhu inta uu kalsooni kuqabo hamigiisa sidii uu uxaqiijin lahaa una huro wakhtigiisa ayuu ku qanci karaa waxqabadkiisa dhiirigalinta ku haboona ka Helaa bulshada ku hareeraysan. Nolosha wax wada adag ma jiraan, Sidoo kale wax wada fududna ma jiraan.
Waa qaaciido bartilmaameed u ah Dadka hanka sare leh, waxayna cadayn utahay haldoorka Umada iyo adkaysiga uu leeyahay ayaa ah ta u horseedaysa Idam Alle soo taabashada Guusha. Duruufaha iyo waayaha ku hareeraysan Bulsho waynta Soomaalida Ogaadeenya waa mid u baahan in si mugle loogu xuubsiibto, iyadoo la fur-furayo dabinkasta oo aan Dan u ahayn Dadkeena.
Itoobiyada maanta wali fool ayay ku jirtaa saas oo ay tahay hadana gacan bidixayntiina ma dhamaanin, taasi oo ay Daw tahay in la iska mooso waxkasta oo dawdaro ku ah Bulshadeena mudada badan soo dulmanayd.
Waxaan Si buuxda u Aaminsanahay inaan hayno tubta xaqiijinta himadeena iyo isbaalmarinta waxaynaan mudnayn. Markasta waa inay diyaar inoo ahaadaan inagoo ka baaraandagayna xaaladaha jirana ku xisaabtamayna wixii inoo xigi lahaa.
Hanaanka hufnaantu waa mid Natiijo wax ku ool ah laga keeni karo hawlkasta markii loo maareeyo sida ay ku haboontahay.
Cabdulaahi Cabdi Ibrahim.